ဒီနှစ်ရဲ့ Google I/O Event ကနေ ဘာတွေမျှော်လင့်နိုင်မလဲ?
30 Apr 2018 . 4:16 PM
Apple ရဲ့ WWDC Event လိုမျိုးပဲ Google ရဲ့ I/O Developer Festival ကလည်း Google ရဲ့ Android OS ပိုင်းဆိုင်ရာ ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲတွေ၊ Google ရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အစီအစဉ်တွေကို တွေ့မြင်ရတတ်တဲ့ Event တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခုနှစ်အတွက်လည်း Google ကနေ လာမယ့် မေလ ၈ ရက်နေ့ကနေ မေလ ၁၀ ရက်နေ့အတွင်းမှာ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Shoreline Amphitheater မှာ ပြုလုပ်သွားမယ်လို့ ကြေညာထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုမျိုး Google ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအပြောင်းအလဲတွေကို မြင်တွေ့ရတတ်တဲ့ Google I/O 2018 မှာရော ဘာတွေကို မျှော်လင့်နိုင်မလဲ? လက်ရှိအဖြစ်နိုင်ဆုံးအရာတွေကို စဉ်းစားကြည့်ရအောင်။
1. Android P ဆိုတာကို အသေးစိတ်ထုတ်ဖော်ပြသလာနိုင်မယ်
Google ကနေ Android P Developer Preview ကို ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းတုန်းက ကြေငြာပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ အခုအချိန်မှာတော့ ပထမဆုံး စစခြင်း Android P Developer Preview က ဘယ်လိုပုံစံရှိလာမလဲဆိုတာကို သိလာရပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု Google I/O မှာတော့ Android P ကို ဘယ်လိုမျိုး ခေါ်ဆိုမယ်ဆိုတာတွေနဲ့ အတူ အခြားသော အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေပါ သိလာရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
2. ပိုပြီး Update ဖြစ်လာမယ့် Google Assistant
Google ရဲ့ Assistant ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးသော Smart Assistant တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်။ Google ကလည်း ယခုနှစ်မှာ နိုင်ငံအသစ် ၃၀ နဲ့ အတူ ဘာသာစကား ၁၇ ခုကိုပါ အသစ်ထပ်မံထည့်သွင်းဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ သိရပြီးတော့ Google က Multilingual Function Tool တစ်ခုကိုလည်း ပြုလုပ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ယခုနှစ်ထဲက ကိုယ်က ဘယ်လိုဘာသာစကားနဲ့ပဲပြောပြော Google Assistant က နားလည်ပြီး ပြန်လည် Response လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
3. Google Services နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြီးမားတဲ့ ပြောင်းလဲမှုတွေ
Google နဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ Services Application တွေလည်း အခု Google I/O 2018 မှာပြောင်းလဲတော့မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် အခု Google I/O 2018 မှာ “What’s New in Google Photos” ဆိုတဲ့ Section တစ်ခုပါဝင်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ အခုအဓိပ္ပါယ်က Google Photos နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အပြောင်းအလဲတစ်ခုရှိလာမယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။ နောက်ထပ် Google ကိုယ်တိုင်ကလည်း Material Design 2.0 ကို ဆောင်ရွက်နေပြီးတော့ Google Chrome ၊ Google Play Services တွေနဲ့ Gmail တွေအကုန်လုံးမှာပါလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲလာတော့မှာပါ။
4. AR နဲ့ VR ပိုင်းကို ပိုပြီး အားစိုက်လာဦးမယ့် Google
Google ရဲ့ Daydream VR ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ သုံးလို့ကောင်းတဲ့ VR Headset တစ်ခုလို့ သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Google ရဲ့ AR Service တစ်ခုဖြစ်တဲ့ AR Core ကိုလည်း ထုတ်ပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခု AR နဲ့ VR Product ၂ မျိုးစလုံးက Support ပြုလုပ်တဲ့ Devices တွေက လက်ချိုးရေလို့ရနေပြီးတော့ အများပြည်သူတွေရဲ့ လက်ထဲကို မရောက်သေးဘူးလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် Google ကနေ AR နဲ့ VR ပိုင်းကို အခုထက်ပိုပြီး အသုံးပြုသူများပြားအောင် ချပြပါလိမ့်မယ်။
5. WearOS အပေါ်ပြောင်းလဲမှုတွေ
Google ကနေ ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်သတ္တပတ်တွေတုန်းကလည်း Android Wear Operating System ကို WearOS ဆိုပြီးပဲ နာမည်ပြောင်းထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့ Google ကနေပြီးတော့ WearOS ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် ပြောင်းလဲမှုတွေ ဘယ်လိုမျိုးရှိလာသလဲဆိုတာကို ပြောကြားခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အခု Google I/O 2018 မှာ What’s New in Wear OS ဆိုပြီး Section တစ်ခုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီနှစ်မှာ Smartwatch တွေ တစ်ခေတ်ဆန်းလာနိုင်ပါသေးတယ်။
Google ရဲ့ I/O 2018 ကတော့ လာမယ့် ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာကျင်းပတော့မှာပါ။ Google က ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတုန်းကလည်း နှစ်အတော်ကြာပြောင်းလဲခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ Gmail Design ကို ပြောင်းလဲပေးခဲ့တဲ့အတွက် Google I/O 2018 ကလည်း မျှော်လင့်ရမယ့် Event တစ်ခုဖြစ်လာဦးမှာပါ။
Apple ရဲ့ WWDC Event လိုမြိုးပဲ Google ရဲ့ I/O Developer Festival ကလညျး Google ရဲ့ Android OS ပိုငျးဆိုငျရာ ကွီးမားတဲ့အပွောငျးအလဲတှေ၊ Google ရဲ့ အနာဂတျအတှကျ အစီအစဉျတှကေို တှမွေ့ငျရတတျတဲ့ Event တဈခုဖွဈပါတယျ။ အခုနှဈအတှကျလညျး Google ကနေ လာမယျ့ မလေ ၈ ရကျနကေ့နေ မလေ ၁၀ ရကျနအေ့တှငျးမှာ အမရေိကနျနိုငျငံ ကယျလီဖိုးနီးယားပွညျနယျမှာရှိတဲ့ Shoreline Amphitheater မှာ ပွုလုပျသှားမယျလို့ ကွညာထားပွီး ဖွဈပါတယျ။
အခုလိုမြိုး Google ရဲ့ အကွီးမားဆုံးအပွောငျးအလဲတှကေို မွငျတှရေ့တတျတဲ့ Google I/O 2018 မှာရော ဘာတှကေို မြှျောလငျ့နိုငျမလဲ? လကျရှိအဖွဈနိုငျဆုံးအရာတှကေို စဉျးစားကွညျ့ရအောငျ။
1. Android P ဆိုတာကို အသေးစိတျထုတျဖျောပွသလာနိုငျမယျ
Google ကနေ Android P Developer Preview ကို ပွီးခဲ့တဲ့လပိုငျးတုနျးက ကွငွောပေးခဲ့တာဖွဈပွီးတော့ အခုအခြိနျမှာတော့ ပထမဆုံး စစခွငျး Android P Developer Preview က ဘယျလိုပုံစံရှိလာမလဲဆိုတာကို သိလာရပွီဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု Google I/O မှာတော့ Android P ကို ဘယျလိုမြိုး ချေါဆိုမယျဆိုတာတှနေဲ့ အတူ အခွားသော အသေးစိတျအခကျြအလကျတှပေါ သိလာရတော့မှာပဲဖွဈပါတယျ။
2. ပိုပွီး Update ဖွဈလာမယျ့ Google Assistant
Google ရဲ့ Assistant ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ အကောငျးဆုံးသော Smart Assistant တဈခုဖွဈတယျလို့ သတျမှတျခံထားရတာဖွဈပါတယျ။ Google ကလညျး ယခုနှဈမှာ နိုငျငံအသဈ ၃၀ နဲ့ အတူ ဘာသာစကား ၁၇ ခုကိုပါ အသဈထပျမံထညျ့သှငျးဖို့ စီစဉျနတေယျလို့ သိရပွီးတော့ Google က Multilingual Function Tool တဈခုကိုလညျး ပွုလုပျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ ယခုနှဈထဲက ကိုယျက ဘယျလိုဘာသာစကားနဲ့ပဲပွောပွော Google Assistant က နားလညျပွီး ပွနျလညျ Response လုပျနိုငျမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။
3. Google Services နဲ့ ပတျသတျပွီး ကွီးမားတဲ့ ပွောငျးလဲမှုတှေ
Google နဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ Services Application တှလေညျး အခု Google I/O 2018 မှာပွောငျးလဲတော့မယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ ဘာဖွဈလို့လဲဆိုရငျ အခု Google I/O 2018 မှာ “What’s New in Google Photos” ဆိုတဲ့ Section တဈခုပါဝငျလာမှာဖွဈပွီးတော့ အခုအဓိပ်ပါယျက Google Photos နဲ့ ပတျသတျပွီး အပွောငျးအလဲတဈခုရှိလာမယျလို့ ယူဆရပါတယျ။ နောကျထပျ Google ကိုယျတိုငျကလညျး Material Design 2.0 ကို ဆောငျရှကျနပွေီးတော့ Google Chrome ၊ Google Play Services တှနေဲ့ Gmail တှအေကုနျလုံးမှာပါလိုကျပွီး ပွောငျးလဲလာတော့မှာပါ။
4. AR နဲ့ VR ပိုငျးကို ပိုပွီး အားစိုကျလာဦးမယျ့ Google
Google ရဲ့ Daydream VR ဟာ လကျရှိအခြိနျမှာ သုံးလို့ကောငျးတဲ့ VR Headset တဈခုလို့ သတျမှတျခံထားရပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ Google ရဲ့ AR Service တဈခုဖွဈတဲ့ AR Core ကိုလညျး ထုတျပေးခဲ့ပွီးဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အခု AR နဲ့ VR Product ၂ မြိုးစလုံးက Support ပွုလုပျတဲ့ Devices တှကေ လကျခြိုးရလေို့ရနပွေီးတော့ အမြားပွညျသူတှရေဲ့ လကျထဲကို မရောကျသေးဘူးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။ အဲ့ဒီအတှကျ Google ကနေ AR နဲ့ VR ပိုငျးကို အခုထကျပိုပွီး အသုံးပွုသူမြားပွားအောငျ ခပြွပါလိမျ့မယျ။
5. WearOS အပျေါပွောငျးလဲမှုတှေ
Google ကနေ ပွီးခဲ့တဲ့ ရကျသတ်တပတျတှတေုနျးကလညျး Android Wear Operating System ကို WearOS ဆိုပွီးပဲ နာမညျပွောငျးထားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီအခြိနျတုနျးကတော့ Google ကနပွေီးတော့ WearOS ဖွဈသှားတဲ့အတှကျ ပွောငျးလဲမှုတှေ ဘယျလိုမြိုးရှိလာသလဲဆိုတာကို ပွောကွားခဲ့ခွငျးမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အခု Google I/O 2018 မှာ What’s New in Wear OS ဆိုပွီး Section တဈခုရှိနတေဲ့အတှကျကွောငျ့ ဒီနှဈမှာ Smartwatch တှေ တဈခတျေဆနျးလာနိုငျပါသေးတယျ။
Google ရဲ့ I/O 2018 ကတော့ လာမယျ့ ရကျပိုငျးအတှငျးမှာကငျြးပတော့မှာပါ။ Google က ပွီးခဲ့တဲ့ရကျပိုငျးတုနျးကလညျး နှဈအတျောကွာပွောငျးလဲခွငျးမရှိခဲ့တဲ့ Gmail Design ကို ပွောငျးလဲပေးခဲ့တဲ့အတှကျ Google I/O 2018 ကလညျး မြှျောလငျ့ရမယျ့ Event တဈခုဖွဈလာဦးမှာပါ။